Wadada isku xirta isgoysyada Howl Wadaag iyo Baar Ubax oo laami lagu bilaabay (Sawirro) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wadada isku xirta isgoysyada Howl Wadaag iyo Baar Ubax oo laami lagu bilaabay (Sawirro)
Mareeg.com: Wadada isku xirta isgoysyada Howlwadaag iyo Baar Ubax ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku socda laami saarid, iyadoo dhismahaas ay iska kaa shanayaan maamulka gobalka Baanadir iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed.
Dhismaha ku socda wadadan oo haataan dadku ugu yeeraan Wadada Koowaad ee Bakaaraha ayaa qeyb ka ah mashruuca “Dalkaaga Dhiso”, waxaana howshaasi fulinaya shirkad qaabilsan dhismaha waddooyinka oo laga leeyahay dalka Turkiga.
Amaanka wadadaas oo aad u buuq badnaa jirtay ayaa aad loo adkeeyey, waxaana wadada laga fogeeyey dadka, iyadoo ay halkaas joogaan ciidamo farbadan oo qarkood ay dusha ka saaran yihiin dhismooyinka dhaadheere ee ku yaalla hareeraha wadooyinka.
Agaasimha guud ee Rugta ganacsiga Soomaaliyeed, Cabdi Abshir Dhoore ayaa sheegay in waddada ay muhiimad gaar ah u leedahay ganacstada Suuqa Baakaraha.
Guddoomiyaha Degmada Howlwadaag, Axmed Nuur Cabdi Siyaad ayaa sheegay in laamigan uu yahay mid casri ah oo dhameystiran, isla markaana bulshada la fahamsiiyo inay iyagu wax qabsan karaan, isagoo ugu baaqay in laga wada qeyb qaato mashruuca dhiso dalkaaga.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir, Xasan Muungaab ayaa horay xariga uga jaray dib dhiska wadadan, waxaana halkaas muddo ka socday burburinta haraagii hore ee jidka, iyo dhismaha Marsha Biyeediyada, waxaana haataan loo gudbay in laami la saaro.
Xabad joojintii Guriceel oo burburtay & dagaal markale qarxay